Mandalo fotoan-tsarotra ny Lyc�e Jacques RABEMANANJARA
Anesorana 500 ny isan’ireo mpianatra raisina amin’ny taom-pianarana 2014-2015
Anesorana 500 ny isan’ireo mpianatra raisina hiditra amin’ny taona faharoa na Classe de Seconde ao amin’ny Lyc�e Jacques RABEMANJARA @ fidirana taom-pianarana 2014-2015 raha toa ka tsy vita mialohan’ny fidiran’ny mpianatra ny fanarenana ireo hefitrano simba tanteraka amin’ ity Lyc�e ity.
Hefitrano miisa 6 no efa tsy azo ampiasaina intsony ao amin’ny Lyc�e Jacques RABEMANANJARA ary miafara amin’ny fandaozana tanteraka ny Batiment GF izany rehefa ankatoky ny fikijan’ny orana misesy. Manano sarotra araka izany ny fandraisana ireo mpianatra miisa 3100 amin’ny hefitrano 56.
Ka velon-taraina ny mpandraharahan’ny sekoly izay tarihin’ny Proviseur Atoa BABITY Phidelis. Ka misy araka izany ny hetsika fampahafantarana ny zava-misy hiainan’ny sekoly eo amin’ny lafiny fahasimban’ny fotodrafitr’asa eo ampelatanany.
Mpianatra miisa 1000 isan-taona no raisin’ity sekolim-panjakana, lyc�e tokona eto Toamasina-I ity ka voatery hanenona hatrami’ny 500 ny ankizy ho raisina amin’ny taom-pianarana hoavy 2014-2015 raha toa ka tsy vita mialohan’ny fidiranan’ny mpianatra ny fanarenana ireo hefitrano simba ireo.
Manoloana izany dia nihetsika avy hatrany ny fikambanan’ny maintimolalin’ny Lyc�e Jacques RABEMANANJARA, izay mivondrona ao amin’ny Amis de Lyc�e Jacques RABEMANANJARA , tarihin’ Atoa Princi RAZAFINDRALAMBO, amin’ny fanoloana ireo hazo efa boboka sy fanarenana ny tafo amin’ny efitra 2 amin’ny efitra 6 simba.
(45) Erino RAZAFIMANANA : 23-05-2014 - 15:00